बानी सुधार्ने हो कि ! – समग्र नेपाल
Youtube मा हामी APS Media VSN Nepal
निर्वाचन, कछुवा मतगणना र प्रविधि
Home/सम्पादकिय/बानी सुधार्ने हो कि !
बानी सुधार्ने हो कि !
समग्र संवाददाता१४ बैशाख २०७९, बुधबार १९:४२
अब जनताहरुले नमस्कारको बाढी थेग्नै नसक्ने अवस्था आएको छ । नमस्कार मात्रै कहाँ होर ज्यू हजुरी पनि पाउने बेला भएको छ । अघिपछि फर्केर बोल्न फुर्सद नहुनेहरुले नोमिनेसन दर्ता गरेपछि जनताको प्यारो बन्ने रस्साकस्सी चल्नु स्वाभाविक नै हो । कसै कसैलाई यो व्यवहारले आजित बनाएको हुँदा सामाजिक सञ्जालहरुमै नमस्कार फर्काएका तस्बीरहरु पनि पोस्ट्याइसकेका छन् । हुनत नेपाली समाजमा ‘चलेको उखान ‘जब प¥यो राती अनि बुढि ताती’ भन्ने त्यसै त चलेको हैन होला नै । यसै उखन जस्तै भएको छ नेपालको हरेक क्षेत्रमा हुने कामहरु । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पनि परेकै हो ।
कुनै पनि राजनेताले भविष्यमा राजनीतिमै लाग्छु भन्ने पहिले नै एकिन गरेर मात्रै राजनीतिमा लाग्ने पर्ने हुन्छ । आजभोलि राजनीति सेवा भन्दा पनि पेशा बनेको छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको नोमिनेसन दर्ताको अवस्थालाई हेर्दा यसमा परेको १ लाख ४ हजार बढीको नोमिनेसनले यहि कुरालाई नैचरितार्थ गरेको छ । कुनै पनि राजनेताले आफूलाई यो क्षेत्रमा नै लाग्ने हो भन्ने मानसिक रुपमा एकिन हुनासाथ आफूलाई पहिलो जिम्मेबारीमा कहाँ के कुरामा समाजप्रति समर्पित गर्ने हो भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गनुपर्ने हुन्छ । भनिन्छ नि एकैपटक टुप्पोमा पलाएको जतिबेला पनि सुक्न सक्छ, जरैदेखि बलियो हुनु आवश्यक छ । अर्थात् राजनीतिमा पनि आफ्नो धरातल के हो ? पृष्ठभूमि के हो र समाजमा आफ्नो के कुरामा वा कुन पक्षमा योगदान रहेको छ र जनताका सामुमा जाँदा पनि के कुरा वा विषय लिएर जाने हो भन्ने कुरालाई राम्ररी बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ । चिठ्ठा प्रणालीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुबाट त के अपेक्षा गर्नु र खै ?
जे होस् बैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ । यसको सरगर्मी बढिसकेको पनि देखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछिको यो दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले पनि यसलाई भने अव जनताले निकै गम्भीर र सजग भएर हेर्नुपर्ने छ । त्यसैले उम्मेदवारहरुले पनि आफ्नो राजनैतिक पृष्ठभूमि र समाजमा आफ्नो योगदान के हो भन्ने कुरालाई कहिल्यै पनि बिर्सनु भने हुँदैन । पाँच वर्षमा एकपटक जनताको घरआँगन र खेतबारीमा जाने हैन कि वर्षमा कमसेकम पनि दुईपटक वा सो भन्दा पनि बढी समय जनताको सुख दुःखमा सरिक हुँदै विकास निर्माण तथा जनजिविका विषयमा योगदान दिने व्यक्ति नै आजको परिस्थितीमा सच्चा नेता हो । त्यसैले यसपालिको निर्वाचनमा आम जनताले मतदान पूर्व एकपटक गम्भीर भएर सोच्नै पर्दछ ।
२ जेष्ठ २०७९, सोमबार १८:३२
श्रीमती कुट्ने श्रीमानकै मृत्यु
२३ बैशाख २०७९, शुक्रबार १९:०९
चुनावी प्रचार शैली : देउसी, भैली
२३ बैशाख २०७९, शुक्रबार १७:०१
सुकुलगुन्द्रे मतपत्र : मतदातालाई सास्ती
२२ बैशाख २०७९, बिहीबार ११:३४
छिमेकीको कुटाइबाट ठहरै
१६ बैशाख २०७९, शुक्रबार १७:३५
गाइनेलाई प्रेमपत्र (पैदल यात्रा : ५० दिनमा महाकाली मेची)
१४ बैशाख २०७९, बुधबार २०:३५
'सूचना, जानकारी, मनाेरन्जन र विश्वसनीय खबरकाे अभियान सूचना र ज्ञानकाे भकारी समग्रनेपाल डट कम ।।
APS Communication द्वारा सञ्चालित www.SamagraNepal.com सूचना र ज्ञानकाे भकारी ।
प्रधानसम्पादक : प्रभात सुवेदी
प्रकाशक : सरिता सिग्देल
प्रबिधी : हार्दिक लामिछाने
जिल्ला स‌वाददाता : .............
सूचना बिभाग दर्ता न‌‍.: २०७७/४५६२१
गुलरिया न‌‍‍‍.पा.-५, बर्दिया
Editor's Personal Blog
2022 © सर्बाधिकार समग्रनेपालमा निहित
Powered By : DigitalTRENDS